Booliska Lesotho oo ku raad joogo marwada koowaad ee dalkaas |
Booliska Lesotho oo ku raad joogo marwada koowaad ee dalkaas
Booliska dalka Lesotho ayaa ku raad joogaa marwada koowaad ee dalkaas,Maesaiah Thabane si wax looga weyddiyo inay xiriir lala laheyd dilka looga geystay xaaskii hore ee ra’iisul wasaaraha Lesotho labo sanno ka hor.
Waxaa soo ifbaxay Jimcihii lasoo dhaafay wararka ah halka ay jaan iyo cirib dhigtay xilliggaas oo ay maxkamadda soo saartay warqad lagu soo xirayo Maesaiah Thaban kaddib markii ay ku guuldareysatay inay hortagto booliska si wax looga weyddiyo dilka haweeneydii uu ra’iisul wasaaraha la qabay.
Maesaiah Thabane, waxaa loo qabtay ilaa Isniinta si ay u hortagto booliska.
Ciidammo hubeysan oo ku raad joogay marwada koowaad xilli Jimcihi ay gaareen guriga ra’iisul wasaaraha Lesotho Thomas Thabane ayaa ku guuldareystay inay gacanta kusoo dhigaan.
Afahayeen u hadlay dowladda ayaa BBC u sheegay in booliska uu diyaar u yahay codsi taageero caalami ah si loo soo qabto haweeneyda.
Xaaskii hore ee ra’iisul wasaaraha Lesotho, Lipolelo Thabane,ayaa bishii Juun ee sannadkii 2017-kii lagu toogtay duleedka magaalada caasimadda ah ee Masero labo maalin uun ka hor inti aan xilka loo caleemo saarin.